Markii 9aad ee Munaasibada Qaran ee Qoomiyadaha Itoobiya Ayaa Ladhamaystiray Diyaar-garowgii Marti-galinta. - Cakaara News
Markii 9aad ee Munaasibada Qaran ee Qoomiyadaha Itoobiya Ayaa Ladhamaystiray Diyaar-garowgii Marti-galinta.
Assosa(CN) Isniin.Dec.01.2014, Munaasiba xuska heer qaran ee maalinta qoomiyaadka Itoobiya oo markii 9aad lagu qabanayo deegaanka Benishangul-gumuz, ayaa waxay dadka iyo huteelada magaalada Assosa xaqiijiyeen in la dhamaystiray diyaar garowgii oo si heer sare ah loo diyaariyay islamarkaana ay diyaar u yihiin soo dhawaynta martida iyo munaasibada.
Magaalada Assosa ee deegaanka Benishangulka ayaa sugaysa in ay laga bilaabo barito qaabisho in kabadan 4000 oo marti ah, waxaana imanaya marti sharaf balaadhan oo ka kala iman doonta qoomiyadaha reer Itoobiya ee deegaanada iyo marti sharaf ka iman doonta qurbaha.
Sida ay sheegayso wakaalada wararka Itoobiya ee ENA, madaxa golayaasha ururada iyo ganacsiga ee deegaanka Benishangulka Sheekh Indriis Axmed ayaa sheegay in heshiis ay ka gaadheen golaha federeshinka in si ku haboon loo diyaariyo in kabadan 930 goobaha martidu dagayso ah.
Sidoo kale sheekh Indriis Axmed ayaa intaas ku daray in guddiga qaban qaabada munaasibada iyo ganacsatado ay ka wada soconayaan in ganacsatadu ay qiimo ku haboon kula mucaamiloodaan martida.
Dadka deegaanka Benshangulka gaar ahaan magaalada Assosa ayaa si wayn u sugaya soo dhawaynta maalinta walaalahooda reer Itoobiya. Waxaana lafilayaa laga bilaabo maalinta bari ah in si toos ah loo qaabilo marti sharafta u imanaysa xarunta Assosa munaasibada qaran ee maalinta qoomiyadaha Reer-Itoobiya. Deegaanka Benshangulka ayaa ah deegaanka uu maro mashruuca wayn ee quwada korantada ee Biy xidheenka dib u curashada Itoobiya (Abbaay).
Xuska maalinta qoomiyadaha Itoobiya oo ku aadan 7 cisho kadib 29-ka bisha Hidhaar ayaa ah xus qaran oo ahmiyad wayn u leh qoomiyadaha, shucuubaha iyo dadyowga reer Itoobiya oo dhan, waana maalin astaan u ah midnimada qoomiyadahaas.
Waxaa xusid mudan in munaasibadii 8aad ee tan kahoraysay lagu qabtay xarunta Jigjiga ee DDSI, taas oo taariikho gaar ah u lahayd deegaan Soomaalida Itoobiya, islamarkaana Jigjiga siisay kaalinta koobaad ee hab-maamuska, soo dhawaynta, iyo marti soorka oo ay Soomaalidu caan ku tahay.